China အိပ်ခန်း 24w 36w အရောင်ပြောင်းလဲနိုင်သော Dimmable Remote Control Smart Acrylic Cover Led မျက်နှာကျက်မီးထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | Aina
မိုးလုံလေလုံ LED မီးသီး
မိုဘိုင်းကထိန်းချုပ်ထားစမတ် LED မီးသီး
Motion Sensor နှင့် Light Sensor ပါသော LED မီးသီး
G13 အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူ T8 Tube LED
LED T8 Tube ပေါင်းစပ်
Tube Frame ကို LED
T8 Tube Tri- အထောက်အထားအိမ်ရာ
Rada နှင့်အတူ T8 Tube
စံ LED မျက်နှာကျက်အလင်း
LED မီးအလင်းနှင့် Panel ကို Down အလင်း
အလင်းကို Down Panel ကို LED
Linear Strip Light ကို LED
LED Trip အထောက်အထားအလင်း
Linear အမြင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလင်း LED
UFO High Bay အလင်းရောင် LED
Shoe Box အလင်းရောင် LED
အခြား LED လမ်းမီး
အားလုံးတစ် ဦး နေရောင်ခြည်အလင်း၌တည်၏
အခြား LED နေရောင်ခြည်အလင်းရောင်
အခြား LED မီး
Wall Wall ကို LED
LED Decoration အလင်း
အိပ်ခန်း 24w 36w အရောင်ပြောင်းလဲနိုင်သော Dimmable Remote Control စမတ် Acrylic Cover Led မျက်နှာကျက်အလင်း
အိပ်ခန်း 24w 36w အရောင်ပြောင်းလဲနိုင်သော Dimmable Remote Control Smart Acrylic Cover Led မျက်နှာကျက်အလင်းရောင်
ပေါင်းစပ် LED module တစ်ခုအလင်းအရင်းအမြစ်ကိုသုံးပါ
အရည်အသွေးကောင်းသည့်မှန်ဘီလူးဒီဇိုင်းနှင့်မှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်းတို့ပါ ၀ င်သော module သည်အလင်းကိုပိုမိုဟန်ချက်ညီစေပြီးအမှောင်,ရိယာမရှိစေပါ။
2835 မြင့်သော CRI၊ စားသုံးမှုနိမ့်ကျခြင်း၊ သက်တမ်းရှည်ခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းနည်းသော SMD ကိုအသုံးပြုပါ။ စံအရောင်အပူချိန်၊ တောက်ပမှုမရှိ။
နိုင်ငံတကာအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောယာဉ်မောင်းသည် CE ROSH SAA TUV လက်မှတ်ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
မြင့်မားသောအရောင် LED - အရည်အသွေးမြင့် LED မီးချောင်းများအသုံးပြုခြင်း၊ သဘာဝအလင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်၊ တုန်ခါခြင်းမရှိ၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်မရှိ၊ သက်တမ်းရှည်သည်။ စွမ်းအင်ချွေတာသောမျက်လုံးများ၊ စိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုသက်သာစေသည်။
အရည်အသွေးမြင့်မားသောသံပစ္စည်း - အရည်အသွေးမြင့်မားသောသံပစ္စည်းမီးခွက်ကိုင်ဆောင်သူသည်တည်ငြိမ်။ ပုံပျက်။ မတည်ပါ။
ပါဝါ 24W / 36W input ကို AC220-240V
CRI > ၈၀ CCT 2700K-6500K
အရွယ်အစား 350/400mm function ကို ဂီယာ ၃ ခု
အာမခံချက် ၃ နှစ် ထုတ်လုပ်မှုအချိန် 8-10 ရက်
လက်မှတ် CE, RoHS အိုင်ပီ IP20
အယ်လ်အီးဒီ SMD 2835 တစ်သက်တာ နာရီ 30000
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့်သဘောတူညီမှုရှိပြီးအခြားကုမ္ပဏီများထက်ပေးပို့နိမ့်သောကုန်ကျစရိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ ဆိုလိုတာက client များရွေးချယ်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်များကိုပေးနိူင်သည်။
၂။ ညီလာခံ / အစည်းအဝေးခန်း
၆။ ကျောင်း၊ ကောလိပ်၊ တက္ကသိုလ်
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏စုံစမ်းမေးမြန်းချက်အားလုံးကို ၂၄ နာရီအတွင်းအသေးစိတ်ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်သောကောင်းသောဘာသာပြန်၊ စိတ်အားထက်သန်သောအရောင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများရှိသည်။
3.Professional လူတစ် ဦး အမိန့်မတိုင်မီသင်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
၄။ တပ်ဆင်ခြင်း၊ နည်းပညာဆိုင်ရာလမ်းညွှန်အပါအ ၀ င်ပြီးပြည့်စုံသည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါ။
6.OEM & ODM သည်လည်းစိတ်ကြိုက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
ဒီဇိုင်း - ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းနှင့် OEM / ODM ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောလူ ၁၀ ဦး ပါ ၀ င်သောဒီဇိုင်းပညာရှင်အဖွဲ့ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအကြံဥာဏ်တစ်ခုပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းနည်းကိုသင့်အားတုံ့ပြန်ပါမည်
ထုတ်လုပ်ခြင်း - ကျွန်ုပ်တို့တွင်စက်မှုလုပ်ငန်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော်နှင့်လည်ပတ်နေသော ream များဖြင့်စက်၊ အမှုန့်ဖုံးအုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု: ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံး panting ကိုရွေးချယ်သည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာဖောက်သည်ထံသို့ပေးပို့သောအပိုင်းတိုင်းသည်ပြီးပြည့်စုံမှုရှိစေရန်အဆင့်တိုင်းတွင်အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အားထုတ်မှုကိုကုန်ဆုံးစေသည်။
နောက်တစ်ခု: ထုတ်ကုန်အသစ်များ Living ည့်ခန်း G ည့်ခန်း၊ ဂူပတ်ပတ်လည်၊ ခေတ်သစ် Led False မျက်နှာကျက်အလင်းအရောင်ပြောင်းခြင်း
Q1 ။ ကျွန်ုပ်၏ထုတ်ကုန်အတွက်နမူနာမှာယူနိူင်ပါသလား။
A: စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန်နှင့်အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်အတွက်နမူနာမှာယူသည်။ ရောနှောနမူနာလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
Q2 ။ အဘယ်အရာကို ဦး ဆောင်အချိန်ကော?
ဖြေ။ ။ နမူနာက ၃-၅ ရက်လိုတယ်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်ဟာအမှာစာအရေအတွက်ထက် ၁-၂ ပတ်လောက်ပိုလိုတယ်
Q3 ။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုသင်မည်သို့တင်ပို့ပြီး၎င်းရောက်ရှိရန်မည်မျှကြာသနည်း။
A: DHL၊ UPS၊ FedEx သို့မဟုတ် TNT တို့ဖြင့်သာပုံမှန်အားဖြင့်ပို့ဆောင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၃ ရက်မှ ၃ ရက်ခန့်ကြာသည်။ လေကြောင်းလိုင်းနှင့်ပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုလည်း optional ကို။
Q4 ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များအတွက်အမှာစာကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ဘယ်လို?
A: သင်၏လိုအပ်ချက်များသို့မဟုတ်လျှောက်လွှာကို ဦး စွာအသိပေးပါ။
မျက်မှောက်ခေတ် ၄ ကံကောင်းသောအရွက်များအလင်းကျနေသောမျက်နှာကျက်သောတောင် ...
အထူးဒီဇိုင်းမျက်နှာကျက်မီး 24W / 36W